Terrazzo Slabs များ
ကျောက်ဆွဲသီးရဲ့ အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။
ကျောက်ဆွဲသီးသည် နံရံပေါ်ရှိ ကျောက်တုံးကို ပြုပြင်ပေးသည့် သံမဏိ ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျောက်တုံးအား သတ္တုကလီနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။၎င်းသည် နံရံနှင့် ကျောက်တုံးကြားတွင် မထိတွေ့နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် t ၏ပစ္စည်းတွင် လျစ်လျူမရှုနိုင်သော လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
admin မှ 22-05-10 ရက်နေ့တွင်
◎ Node နမူနာ ◎ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် မြေပြင်သန့်ရှင်းရေး → အစမ်းတပ်ဆင်ခြင်း → ဘိလပ်မြေ slurry bonding အလွှာ → ကျောက်ခင်းခြင်း → ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု → ကြည်လင်သောမျက်နှာပြင် ကုသမှု ◎ ပေါ်လွင်ချက်များ 1) ကျောက်ပုံစံအစီအစဥ်ကို နက်ရှိုင်းစွာမလုပ်ဆောင်မီ ဆိုက်၏အရွယ်အစားကို စစ်ဆေးရပါမည်။ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပရောဂျက်ဌာန...
Skirting Line ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ နံရံနှင့် မြေပြင်ကို ခိုင်မြဲစွာ ပေါင်းစပ်ထားရန်၊ နံရံ၏ ပုံပျက်ခြင်းကို လျှော့ချရန်၊ ပြင်ပအင်အားနှင့် တိုက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် ညစ်ညမ်းစေသော ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နံရံ၏ ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရန် ဖြစ်ပါသည်။ မြေပြင်က နံရံပေါ်မှာ ရေတွေ...
သဘာဝဇိမ်ခံကျောက်များ အကြွင်းအကျန်များကို လမ်းခင်းရန်အတွက် အသုံးပြုပါသလား။ဒီမှာပါ!
ဒဏ္ဍာရီလာ ရတနာအများစုသည် မရေမတွက်နိုင်သော ကြွယ်ဝမှုနှင့် ရွှေငွေ လက်ဝတ်ရတနာများ ရှိသည့် ရေအောက်နဂါးနန်းတော်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ဒဏ္ဍာရီများသည် ဒဏ္ဍာရီများဖြစ်သည်။ရတနာအစစ်တွေက ဘယ်ကလာတာလဲ။အဖြေက မြေကြီးအောက်မှာ။ကမ္ဘာမြေကြီးထဲမှာ နစ်မြှုပ်နေတဲ့ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ရတနာတွေရှိတယ်၊
Biophilic Design နှင့် Terrazzo
အခြေခံအားဖြင့်၊ ဤဒီဇိုင်းအစပျိုးမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း သဘာဝနှင့် အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များကို မည်သို့ပေါင်းစပ်ရမည်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။သုတေသနပြုချက်များအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားချက်၊ စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အလုံးစုံကျန်းမာရေးကို များစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။ဒီသဘောတရားကို အောင်အောင်မြင်မြင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့...
အဖြူရောင်သည် သမိုင်းကြောင်းအရ ဗိသုကာပညာတွင် အလွန်အရေးကြီးသောအရောင်ဖြစ်သည်။အမှောင်များ၊ အလင်းများနှင့် အရိပ်များကို ပြသနိုင်စွမ်းရှိသည်။White terrazzo သည် အာကာသကို လှပဆန်းပြားသော ပုံစံဖြင့် သတ်မှတ်ရန် ပြီးပြည့်စုံသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။အဖြူရောင်သည် အချိန်မကုန်သောကြောင့် အဝင်အထွက် စတိုင်လ်မကျပါ။အဖြူရောင် စဉ့်အိုးတန်း...
ဘိလပ်မြေနှင့် Epoxy Terrazzo အသုံးပြုမှု၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု
ခရက်ဒစ်လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်နိုင်သည့်အချက်များ Terrazzo ၏ပံ့ပိုးကူညီမှု MR Credit: အဆောက်အဦဘဝ-စက်ဝန်း ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေး ရွေးချယ်စရာ 3. အဆောက်အဦနှင့် ပစ္စည်းပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း 2-4 ပြန်လည်အရောင်တင်ထားသော ရှိပြီးသားကြမ်းပြင် MR Credit: ဆောက်လုပ်ရေးထုတ်ကုန်ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း - ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ စုဆောင်းခြင်း ရွေးချယ်စရာ 2. ခေါင်းဆောင်မှု အပို.. .
အချိန်မရွေး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။